Shirkadaha Quwada Korontada ee Anderson iyo Warshadaha - Soosaarayaasha Xiriyaha Quwada ee Shiinaha Anderson
50A 120A 175A 350A Isku Xirka Degdega ah 2 Pole Anderson Connector Forklift Battery Cable
50A 120A 175A 350A isku xirka Degdega ah 2 Pole Anderson Connector Forklift Battery Cable wuxuu qaadi karaa kan hadda socda laga bilaabo 50A ilaa 350A wuxuuna la kulmi karaa TL, CUL, shahaadada CCC, oo loo adeegsan karo amniga isgaarsiinta saadka, Nidaamka Solar PV Systems, aaladaha korantada, UPS Nidaamyada, Gawaarida Korantada, Quwadda caafimaad ee la xakameeyay awoodda AC / DC iwm.
Anderson Xiriiriyaha Kaabayaasha Qalabka Daboolida ee Daboolida Xirmooyinka Gacanta Gogosha
Isku xireyaasha korantada ee Anderson waxay leeyihiin aalado badan oo faa'iido leh oo ay adeegsadaan, sida daboolida boodhka daboolida, xirmooyinka xirmooyinka, xammuulka, fiilada fiilada, 2pole / 3pole sheath iyo gacmo gashi iwm.
1P 45A Buugga hal-dooriga ah ee Anderson Plug Terminal ee Baytariga Awoodda Gaariga ee Korantada
1P 45A Single Pole Anderson Plug Terminal for Batterka Solar Batteriga wuxuu qaadi karaa kan hadda ah 15A ilaa 180A, wuxuuna la kulmi karaa TL, CUL, shahaadada CCC, oo loo adeegsan karo amniga isgaarsiinta saadka, Nidaamka Solar PV Systems, aaladaha korantada, UPS. Nidaamyada, Gawaarida korantada, quwadda caafimaad ee hoos yimaad AC / DC iwm.
3 Pole Triphase Anderson Power Battery Ballaari Gawaarida bateriga SB50A
Xiriirada taxanaha SGD50 waxay dejiyeen halbeega loogu talagalay qeybinta korantada DC iyo isku xirnaanta batteriga. Isku xireyaasha SGD50 waxay muujinayaan hal gabal oo balaastig ah iyadoo la adeegsanayo ilo bir aan kala maarmin si ay meesha ugu hayaan xiriiro iska caabin hooseeya. Cabbirrada fiilooyinka laga bilaabo # 16 (1.5 mm²) illaa # 6 (13.3 mm²) waxaa lagu qabtaa ugu yar ee hoyga taxanaha ee SGD50.